Wareysi: Guddiga Qaxootiga Yemen oo sheegay in aysan sii heyn karin qaxootiga Yemen ka yimid - Radio Ergo
Guddiga badbaadinta iyo samatabixinta qaxootiga Yemen oo dowladda Soomaaliya ay dhowaan u xilsaartay caawinta qaxootiga Soomaaliyeed ee laga soo daabulayo dalka Yemen, ayaa sheegay inaysan qorshe dheer u heynin qaxootigaas, awooddoodana aysan dhaafsiisneyn inay soo dhoweeyaan keliya. Weriyaha Ergo, Fowsiya Cumar Barre ayaa wareysatay, waxayna ugu horreyn weydiisay inuu ka warbixiyo ujeeddada guddiga.
Sheekh Nuur Baaruud: Guddigeenna waxaan billownay inaan wacyi gelinno bulshada si ay u taageeraan qaxootiga, hadda inta naloogu yaboohay weli badankood lacagtaas gacanteenna masoo gelin. Markab uu nin Soomaali ah u diray qaxootiga Yemen, berri baan fileynaa inuu yimaado, soo dhoweyn iyo isu diyaarin baan ku jirnaa, sidoo kalena Boosaaso inay qaxooti yimaadaan ayaa la filayaa maanta.
Ergo: Ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay?
Sheekh Nuur Baaruud:Howshu waa bilow, laakiin markabkaas loo diray qaxootiga ayaa noogu muhiimsanaa oo berry imaanaya.
Ergo: Waxaad sheegtay inaad wacyigelin iyo qaaraan uruurin aad sameyseen, ma jiraan wax idiin soo gaaray?
Sheekh Nuur Baaruud:Waxaa naloo yaboohay ilaa 170,000 doollar, waxaana heynaa 30,000 oo doollar. Laakiin howshu waa bilow oo waxaan fileynaa yabooh badan.
Ergo: Tiro-kob maka heysaa dadka Muqdisho soo gaaray?
Sheekh Nuur Baaruud:Muqdisho waxaa yimid hal diyaarad oo wadday 95 qof, laakiin waxaa jira dad isa soo dabbaray oo diyaarad soo raacay kana yimid Jabuuti, Boosaaso iyo Berbera, laakiin tirokoob sax ah ma heyno hadda.
Ergo:Dhaqaalahan aaad heysaan maxaa idiin qorsheysaan inaad ku qabataan, ma dib-udejin baad u sameyneysaan dadka, ma gobolladaad u direysaan, maxaa idiin qorsheysan?
Sheekh Nuur Baaruud:Qorshaha keligeen maaha, hay`ado ayaa nala shaqeeya, diyaaraddii timid oo kalehay`ad baa keentay, ilaa 3 beri bey heysay lacag yar bey siisay kadibna way iska sii deysay. Laakiin annaga qorshaheenna maaha in qaxooti cusub la abuuro oo xeryo la sameeyo, ee waa in dadka la caawiyo kadibna ay aadaan meelaha ay ka kala soo jeedaan.
Ergo: Waxaad hore warbaahinta uga sheegteen in qaxootigaas aad ilaa 3 beri heyneysaan, kadibna aad fasaxeysaan oo meeshuu ka yimid uu aado, marka taas sow dhib maaha maaddaama dadku ay muddo dalka ka maqnaayeen oo aysan aqoon meel ay nolosha ka billaabaan?
Sheekh Nuur Baaruud:Markii horeba ayagoo xabbad ka cararay oo aan waxna heysan bey Yemen aadeen, hadda maaddaama ay dalkooda joogaan, siday isku dabbaraan ayagaa yaqaanna, annaga waxaan awoodno waan u qabaneynaa, kadibna ayagaa laga rabaa inay is dabbaraan oo gobolladooda aadaan.
Ergo:Marka qorshihiinnu waa inaad maalmaha hore heysaan, kadibna aad magaalada kusii deysaan?
Sheekh Nuur Baaruud:Qorshaheenna koowaad waa inaan dadkaas Yemen jooga aan soo dhaafinno xabadda circa iyo dhulkaba ka socota halkaas, wixii doon loo kireyn lahaa iyo wixii markab loo diri lahaaba. Waxaan ugu baaqayaa Soomaalida dal iyo dibad inay caawiyaan dadkaas.
SHACABKA BUURDHUUBO OO KA CABANAYA SARE U KACA RAASHINKA